चार सडक र एक पुलको शिलान्यास | गृहपृष्ठ
Home विकास चार सडक र एक पुलको शिलान्यास
on: May 02, 2018 विकास
चार सडक र एक पुलको शिलान्यास
सुरुङ्गा । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मङ्गलवार झापामा चाराओटा सडक र एउटा पुलको शिलान्यास गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले रू. ७७ करोड १५ लाख ५८ हजार लागतका चार सडक र रू. २३ करोड ६९ लाख लागतको विरिङ खोला पुलको शिलान्यास गरेका हुन् ।
ग्रामीण सडक सञ्जाल आयोजनाअन्तर्गत चारपाने–चैतुवारी–मतीगढा–साँघुटार–घोडामारी–राजगढ सडकको शिलान्यास गरिएको छ । यो सडकको लम्बाइ १५ दशमलव ६ किलोमिटर छ । हुलाकी राजमार्ग छोएको सडक एशियाली विकास बैङ्कको ८० प्रतिशत लगानी र नेपाल सरकारको २० प्रतिशत गरी रू. १८ करोड ५७ लाख ९० हजार ४५६ मा निर्माण गरिँदै छ । सडक निर्माणसँगै राजमार्ग दक्षिणका ५८ हजार ७ सय ६५ बासिन्दा प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने बताइएको छ ।
पूर्वाधार विकासमा संलग्न निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विकास (डोलिडार)अन्तर्गत ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार योजना कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार र एशियाली विकास बैङ्कबीच सम्झौताबमोजिम सो सडकको स्तरोन्नति शुरू भएको छ ।
२०८० वैशाखसम्ममा काम सक्नेगरी सडकको स्तरोन्नतिको शिलान्यास भएको छ । कालोपत्रस्तरमा सडकको स्तरोन्नति तथा कार्यसम्पादनमा आधारित मर्मत आयोजनाको मुख्य काम रहने बताइएको छ ।
यसैगरी खर्साङवारी–जलथल–अधिकारी चोक सडक खण्डको शिलान्यास गरिएको छ । सो सडकको लम्बाइ ६ दशमलब ५ किलोमिटर छ । आमलडाँगी–समयगढ–सोलमारी सडक ११ दशमलव ५ किलोमिटर र पाडाजुङ्गी–झर्का–चप्रामारी–खजुरगाछी १० किलोमिटर गरी ४३ दशमलव ५ किलोमिटर सडक खण्डको पनि स्तरोन्नतिका लागि शिलान्यास भएको छ । यस्तै, पाडाजुङ्गी–झर्का–बालुवथान–चप्रपामारी–खजुरगाछी सडक आयोजनाको समेत स्तरोन्नति गर्न लागिएको छ । यो आयोजनासमेत २०८० साल वैशाखमा सम्पन्न भइसक्नुपर्ने सम्झौता भएको छ । यससँगै अर्जुनधारा नगरपालिका भएर बग्ने विरिङ खोलामा पक्की पुलको पनि शिलान्यास गरिएको छ । रासस